Igbe Simulator – Ndị aghụghọ&Mbanye anataghị ikike – Gam akporo Ndị aghụghọ Atụmatụ
Igbe Simulator – Ndị aghụghọ&Mbanye anataghị ikike
Site na Editor | Jenụwarị 18, 2022
Ihe a abụghị akwụkwọ iwu ma Supercell akwadoghị ya. Maka ozi ndị ọzọ, hụ amụma ọdịnaya Fan Supercell: www.supercell.com/fan-content-policy
Egwuregwu a abụghị Brawl Stars Hack. Ị nweghị ike ibufe brawlers na egwuregwu anyị Brawl Stars Box Simulator na Brawl Pass na ezigbo Brawl Stars.
Igbe simulator Brawl Stars bụ egwuregwu nke ị nwere ike inwe ọ joyụ nke imepe ikpe. Onwere ike ịdaba dị nso dịka o kwere omume na Brawl Stars. Site n'enyemaka nke simulator igbe anyị, ị nwere ike gbakọọ igbe ole ịchọrọ imeghe iji nweta mkpụrụedemede niile, igbe ole ga-emegherịrị iji gbapụta ụfọdụ agwa, dị ka Colonel Rufs ma ọ bụ Byron ruo max larịị.
Egwuregwu ntuziaka a nwere 2 akụkụ: akụkụ 1 bụ ọkọlọtọ oghere nke igbe, akụkụ 2 bụ ịkwalite ndị agha, ịme egwuregwu, nweta iko ma mechaa Brawl Pass. Enwere ụlọ ahịa na egwuregwu ntụaka anyị, ebe ụbọchị ọ bụla ị nwere ike nweta igbe kacha wee zụta isi ike maka brawlers.
Atiya: Ndị aghụghọ na mbanye anataghị ikike ma ọ bụ Atụmatụ Mkpado: Box, CheatsHack, Simulator
← Poppy Huggy Wuggy Hide ‘N Seek Cheats&Mbanye anataghị ikike Oge mgbapụ na Huggy – Ndị aghụghọ&Mbanye anataghị ikike →